संसदमा दुई तिहाइ ल्याएको संसदको नेता हुँ म, अनि भाग्ने कुरा हुन्छ?’ – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
संसदमा दुई तिहाइ ल्याएको संसदको नेता हुँ म, अनि भाग्ने कुरा हुन्छ?’
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु संसदलाई जवाफ दिन त’यार रहेको बताएका छन्। बिहीबार बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै संसदबाट आफु नभागेको र जुनसुकै प्रश्नको पनि जवाफ दिन तयार रहेको बताएका हुन्।
‘म एक÷दुई दिन संसद गइन। बोल्न खोज्दा हुलहुज्जत गरेर बोल्न नदिएको देख्नु भइहाल्यो। संसदमा दुई तिहाइ ल्याएको संसदको नेता हुँ म, अनि भाग्ने कुरा हुन्छ?’
ओलीले भने ‘म संसदबाट भागेको भन्ने के शब्द बोलेको? म कुनै समय गएर के-के रहेछ उहाँहरुको कुरा सुनेर सबै जवाफ दिन्छु। हाम्रा साथीहरु यस्ता कुरामा अल्झिनु हुन्न।’
एउटा टेप प्रकरणमा अनाडी र अनाधिकृत मान्छेले आरोप लगाउँदै हिँडेको छ। मेरोबारेमा प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो सञ्चारमन्त्रीले र राजीनामा दिनुभयो। त्यसलाई स्वीकार गरियो। उहाँले न्याय खोज्छु भन्नु भएको छ कुनै प्रमाणित छैन्। स्वीस दूतावासले पनि त्यो फेक हो भनिसक्यो। सत्यता छैन्। आफ्नो नाममा बात लागेको भएर राजीनामा दिए। तर भ्रष्टाचार गरेको भनेर प्रमाणित गरेजस्तो केही छैन्।
आरोप छैन्, मुद्दा चलेको छैन्। मेरो नाममा पनि उजुरी हालेको भनिएको छ। उजुरी काम नलाग्ने प’त्रु हो, त्यो भ्रष्ट उजुरी हो। अनाडी मान्छेले केही भनेर गर्छ भने त्यो के हो? कसका लागि हो? मैले डिफेन्स गर्न खोजेको होइन। झुटा कुरा गरेर आन्दोलनलाई बदनाम गर्न पाइँदैन। झुटो बोल्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
Previous लक्ष्मी माताको द’र्शन गर्दै आज – १६ फाल्गुण २०७६ शु’क्रवार को राशिफल हेरौं । शेयर !
Next महराको सन्तानले मलाई मार्ने ष’डयन्त्र गर्दैछन् : रोशनी शाही’